Nagu saabsan - Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Bixiyeyaashaada Xallinta Magnetic Magan
Meiko Magnetics wuxuu had iyo jeer maskaxda ku hayaa in "hal-abuurka, tayada iyo shuruudaha macaamiisha ay yihiin udub dhexaadka shirkadda". Waxaan rajeyneynaa khibradeena ku saabsan golayaasha magnetka inay awoodi karaan fikradahaaga wanaagsan.
Mashiinka Jarida Birta
Imtixaanka Xoogga Bir Magnet
Muunado Magnet ah Precast
Faa'iidooyinka shaqaalaheena xirfada leh iyo khibradaha baaxada leh ee wax soo saarka, annaga, Meiko Magnetics, waxaan awood u leenahay naqshadeynta, horumarinta iyo soo saarista dhammaan barnaamijyada magnetka aad ku riyootay. Waxaan inta badan soo saarnaa nidaamyada haynta magnetic, nidaamka filter magnetic, nidaamka shuttering magnetic ee warshado badan, sida caadiga ah u shaqeynaya sida raadinta, hagaajinta, maaraynta, dib u soo celinta, kala sooca qalabka birta ah ee ujeedooyinka.
-Naqshadeynta magnetic / qulqulka
-Biraha xaashida shaqeeya
Waxaad ka heli kartaa dhamaanba kulamada magnetic ndfeb magnetic